MWC 2020: everything to expect from the world’s biggest mobile phone show | Net Guide
Home Article MWC 2020: everything to expect from the world’s biggest mobile phone show
MWC 2020: everything to expect from the world’s biggest mobile phone show
နညျးပညာလောကအတှကျ စိတျလှုပျရှားစရာအကောငျးဆုံး၊ မြှျောလငျ့ခငျြစရာအကောငျးဆုံးနညျးပညာပွပှဲကွီးကို ဒီလရဲ့ နောကျဆုံးပတျမှာ ကငျြးပသှားတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ MWC 2020 ပှဲကွီးကို ဖဖေျောဝါရီ 24 ရကျနကေ့စလို့ 27 ရကျနအေ့ထိ ဘာစီလိုနာမှာ ကွီးကယျြခမျးနားစှာ ပွုလုပျပေးသှားမှာပါ။ ဒီပှဲကွီးမှာတော့ နိုငျငံတကာမှာရှိတဲ့ စမတျဖုနျးထုတျလုပျသူတှဟော သူတို့ရဲ့ 2020 ခုနှဈအတှငျးထုတျလုပျရောငျးခလြာမယျ့ အရညျအသှေးမွငျ့ ဖုနျးတှကေိုလာရောကျပွသကွပါတယျ။ ဒီနညျးပညာပှဲမှာ ပွသလိုကျတဲ့ စမတျဖုနျးတှဟော အနှေးနဲ့အမွနျဈေးကှကျထဲကိုရောကျလာတာပါဘဲ။ အခု 2020 မှာလညျး စမတျဖုနျးထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှဟော နညျးပညာမွငျ့စမတျဖုနျးသဈတှေ ထုတျပွဖို့ရှိနပေါတယျ…. ။ အဲ့ဒီဖုနျးတှကေ ဘာဖုနျးတှမြေား ဖွဈနမေလဲ …. ။
1) Something unclear from Samsung
ကိုရီးယားကုမ်ပဏီရဲ့ အဆငျ့မွငျ့စမတျဖုနျးကို MWC မှာ မိတျဆကျမှာလားဆိုတဲ့ကိစ်စကတော့ ရှငျးလငျးလှနျးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ Samsung ဟာ MWC မတိုငျခငျ လာမယျ့ရကျပိုငျးအတှငျးမှာတငျ စမတျဖုနျးသဈတှကေိုမိတျဆကျ ပေးတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ Galaxy S20 ဖုနျးသဈတှကေိုမြျောလငျ့နမေယျဆိုရငျတော့ မကွာခငျ ရကျပိုငျးလောကျမှာ မွငျရတော့မယျ့လို့ ပွောခငျြပါတယျ။ ဖုနျးသဈတှနေဲ့ပတျသတျတဲ့ အခကျြအလကျတှလေညျး အလုံးစုံနီးပါး လောကျထှကျထားပွီးသား ဖွဈနပေါပွီ။
အဆငျ့မွငျ့ Galaxy ဖုနျးတှကေိုစောစီးစှာတှရေ့ပွီးတဲ့ နောကျမှာတော့ Galaxy A ဖုနျးသဈတမြိုး ဒါမှမဟုတျ တမြိုးထကျပိုတာမြိုးကို တှနေို့ငျပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကတော့ Samsung Galaxy A50 နဲ့ Samsung Galaxy A30 ဖုနျးတှကေို တှခေဲ့ပါတယျ။ အခု 2020 မှာလညျးဒီလိုအလားသဏ်ဍာနျရှိတဲ့ မြိုးဆကျသဈဖုနျးတှကေို မိတျဆကျလာနိုငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ Galaxy A ဖုနျးတှဟော လူကွိုကျမြားပွီး အလယျအလတျတနျးစားဖုနျးတှထေဲမှာ ထိပျတနျးစှမျးဆောငျရညျနဲ့ ဖွဈနလေို့ပါ။ Galaxy A ဖုနျးတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးနဲ့ ပတျသတျပွီး ဘယျလောကျထိ နညျးပညာအမွငျ့ပိုငျးတှေ သုံးထားလညျးဆိုတာကို Galaxy A80 ကသကျသပွေထားပါတယျ။ Samsung ဘကျကတော့ Galaxy A51 နဲ့ Galaxy A71 ဖုနျးတှကေို CES မှာထုတျပွခဲ့ပွီးပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ MWC ပှဲမှာတော့ Galaxy Tab S6 5G သို့ wearable ထုတျကုနျတှဘေကျကိုအာရုံစိုကျဖို့ မြားပါတယျ။
Huawei ကတော့ ဒီပှဲကွီးအတှကျ သတိထားစရာကောငျးလှပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာ့ ဒီတရုတျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူဟာ MWC မှာ အဓိကဖုနျးတှကေို ထုတျပွတတျလို့ပါ။ ထငျရှားတဲ့ အကွောငျးအရာတခုကို ပွောရမယျဆိုရငျ foldable Huawei Mate X ကို MWC 2019 မှာထုတျဖျောပွသခဲ့တာမြိူးပါ။ Huawei P40အနနေဲ့ Google ဝနျဆောငျမှုတှကေိုရရှိနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒါကိုကပဲ Huawei အတှကျ ဈေးကှကျအာရုံစိုကျခံစရာ အကွောငျးရငျးတရပျ ဖွဈလို့နပေါတယျ။ တရုတျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူအနနေဲ့ Quad Quad Bayer filter နဲ့အတူ 52MP ကငျမရာအာရုံခံကိရိယာအသဈတှေ သုံးလာမယျလို့လညျး ပွောထားပါတယျ။ Huawei P40 စမတျဖုနျးရဲ့ ဈေးနှုနျးက ယူရို 600 ဝနျးကငျြနဲ့ ပရိုဖုနျးကတော့ ယူရို 800 ဝနျးကငျြဖွဈပါတယျ။ တတိယမွောကျ မျောဒယျဖွဈတဲ့ Huawei P40 Pro Premium edition ကိုတော့ ဒျေါလာ 1000 နဲ့ ရောငျးခလြာမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ P40 Pro မှာ အရငျမြိုးဆကျရဲ့ Notch အစားသေးငယျတဲ့ Punch Hole ပါလာနိုငျပွီး မကျြနှာပွငျရဲ့ဘယျနဲ့ညာဘကျဟာ ပိုကှေးညှတျမှာပါ။ အနောကျဘကျမှာ 52MP Main ကငျမရာနဲ့အတူ Quad-bayer Filter ကွောငျ့ 13MP Photo တှထေုတျလုပျပေးနိုငျမှာပါ။ အနောကျကငျမရာ5လုံးတောငျပါမယျလို့ သတငျးထှကျခဲ့ပါတယျ။ အရှနေဲ့အနောကျဘကျကို Curved Panel နဲ့ဖုံးအုပျထားနိုငျပါတယျ။ မကျြနှာပွငျအရှယျအစားက 6.5 လကျမကနေ 6.7 လကျမအတှငျး ရှိနိုငျပါတယျ။ လလေ့ာဆနျးစဈသူ Ming-Chi Kuoက P40 Pro ရဲ့ Periscope Telephoto ကငျမရာမှာ 10x Optical Zoom ပါမယျလို့ မကွာခငျကပွောထားပါတယျ။
3) Sony Xperia 2
Sony အနနေဲ့ MWC ပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီးဘယျလိုသတငျးထုတျပွနျခကျြနဲ့ မီဒီယာအသိပေးခကျြတှေ မပေးထားပမေယျ့ ဖုနျးမျောဒယျတမြိုးလောကျတော့ မိတျဆကျလာမယျဆိုပွီး သတငျးထှကျနပေါတယျ။ အမြားစုခနျ့မှနျးခကျြတှအေရ Sony Xperia2(သို့) Sony Xperia5Plus တမြိုးမြိုး ဖွဈမယျလို့ သတငျးထှကျထားတာတော့ ရှိနပေါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ Sony အနနေဲ့ MWC ပှဲတိုငျးမှာဖုနျးသဈပွသတာမြိုးတှေ ပွုလုပျတတျလို့ပါ။ အထငျရှားဆုံးနဲ့ အနီးစပျဆုံးကိုပွောရမယျဆိုရငျတော့ 2019 က Sony Xperia 1 ကိုမိတျဆကျခဲ့တာမြိုးပါ။ တကယျလို့ Xperia2မိတျဆကျခဲ့မယျဆိုရငျ 21:9 display နဲ့ high-end specs တှပေါတဲ့ ဖုနျးမြိုးဖွဈမှာကတော့ မလှဲပါဘဲ။ နောကျထပျကတော့ ဒီဇိုငျးပိုငျးအပွောငျးအလဲ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ပရိုဆကျဆာကတော့ ဒီအခြိနျဒီပရိုဆကျဆာမှ မသုံးဘာသှားသုံးမလညျးဆိုရလောကျအောငျ Snapdragon 865 processor ပဲ ဖွဈမှာပါ။ ကငျမရာအတှကျ quad-lens camera, 12GB RAM နဲ့ 6.6-inch screen သာပါလာမယျဆိုရငျ ဆိုနီဖနျတှအေတှကျတော့ အတျောမိုကျတဲ့ ဖုနျးဖွဈလာမှာပါ။
Huawei ရဲ့ foldable phone ဖွဈတဲ့ Mate X စမတျဖုနျးကို MWC 2019 မှာမိတျဆကျခဲ့တယျဆိုတာကို မှတျမိကွအုံးမယျ ထငျပါတယျ။ ဒီနှဈမှာတော့ အဲ့ဒီ foldable phone ရဲ့နရောကိုဆကျခံမယျ့ မြိုးဆကျသဈဖုနျးကို မိတျဆကျလာနိုငျပါတယျ။ အားလုံးခနျ့မှနျးခကျြတှအေရတော့ Huawei Mate Xs ကို မွငျရတော့မယျဆိုတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပထမမြိုးဆကျနဲ့ ဒီဇိုငျးပိုငျးမှာအရမျးကွီးကှာဟခကျြတှေ ရှိလာမှာမဟုတျဘဲ အတှငျးပိုငျးတှကေိုတော့ အဆငျ့မွငျ့တငျမှုတှေ ပွလုပျထားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာအနီးစပျဆုံး ပွငျဆငျခကျြရှိမယျဆိုရငျ ပရိုဆကျဆာနဲ့ ကငျမရာတို့ပဲ ဖွဈမှာပါ။ original Mate X ကတော့ ကငျမရာပိုငျးမှာ Mate 20 နဲ့တူပွီး၊ ပရိုဆကျဆာကတော့ P30 သုံးထားတာမြိုး ဖွဈပါတယျ။ အခုတော့ Mate Xs ထှကျမယျဆိုရငျတော့ P30 Pro ကငျမရာနဲ့ Mate 30 ပရိုဆကျဆာ ဖွဈမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ အသဈမိတျဆကျလာမယျ့ Mate Xs ဟာ ဒီဇိုငျးပိုငျးမှာပိုကောငျးတဲ့ ဖနျသားပွငျခြိတျဆကျမှုနဲ့အတူ ဖနျသားပွငျဟာ ပိုမိုသနျမာလာပါလိမျ့မယျ။ ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ ဒီဇိုငျးပိုငျးကို အတျောဂရုစိုကျပွောငျးလဲခဲ့တယျလို့လညျး သိရရပါတယျ။ Mate X ထကျပိုသေးမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ အံ့သွစရာကောငျးလောကျအောငျပဲ သူ့ဟာအရငျဗားရှငျးထကျ ဈေးပိုသကျသာမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါဟာဖနျသားပွငျ ထုတျလုပျမှုပိုငျးမှာ ပိုမိုတိုးတကျလာလို့ ဖွဈပါတယျ။
5) Nokia 9.2 PureView
Nokia အနနေဲ့ Nokia9PureView ကို MWC 2019 မှာထုတျပွခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ MWC 2020 မှာမြှျောလငျ့ရမှာက Nokia 9.2 PureView ပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အသဈထှကျလာမယျ့ ဖုနျးဘယျလိုနာမညျပေးမလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတခြို့ ရှိပမေယျ့ Nokia 9.2 PureView ဆိုတာကတော့ အတျောလေးချေါလို့ကောငျးတဲ့ နာမညျလို့သာပွောရမှာပါ။ အားလုံးကတော့ Nokia 9.1 ထကျ Nokia 9.2 PureView သာပို ဖွဈသငျ့တယျလို့ မှတျခကျြပေးထားကွပါတယျ။ မြိုးဆကျသဈဖုနျးမှာကငျမရာပိုငျးနဲ့ 5G အဆငျ့မွငျ့တငျမှုပါမှာကတော့ သခြောပါတယျ။ ဒီဖုနျးသဈနဲ့ပတျသတျတဲ့ ကောလာဟလတှေ ထှကျထားပါတယျ။ နောကျဆုံးရသတငျးပျေါ မူတညျတှကျခကျြရရငျ နောကျဆုံးပျေါ Snapdragon 865 chipset ကိုသုံးမယျဆိုတာပါ။ HMD Global အနနေဲ့ MWC ပွီးမှလညျး ဖုနျးသဈကိုမိတျဆကျပေးနိုငျပါတယျ။
6) LG G9
LG အနနေဲ့ MWC မှာဖုနျးသဈတလုံးလောကျတော့ မိတျဆကျမယျဆိုပွီး ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။ အားလုံးကတော့ LG G9 ဖုနျးဖွဈမယျဆိုပွီး မြှျောနကွေပါတယျ။ LG G9 ဖုနျးနဲ့ပတျသတျပွီး ကြှနျတျောတုိ့ဘာသတငျးအခကျြမှ မရသေးပါဘူး။ ကွညျ့ရ တာတော့ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှေ ဒီဖုနျးမှာထညျ့သှငျးပေးနိုငျပါတယျ။ LG flagships တှမှော ထညျ့ပေးထားတဲ့ function မြိုးတှသေုံးရမှာပါ။ LG G8X ThinQ လိုမြိုး ဒုတိယမကျြနှာပွငျ ခြိတျဆကျမှုရတဲ့ ဖုနျးဖွဈလာမလား၊ LG G8 လိုမြိုးhole-less vibrating speaker ဖုနျးမြိုးဖွဈမလား။ အဲ့ဒီထကျမြား ဆနျးသဈလာမလားဆိုတာကတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
7) XiaomiMi 10
Xiaomi အနနေဲ့ ဥရောပနိုငျငံရဲ့ စမတျဖုနျးဈေးကှကျကိုရဖို့အတှကျ တောကျလြောကျကွိုးစားနပေါတယျ။ သူ့ဆီကထှကျတဲ့ ဖုနျးတှဟောတဖွညျးဖွညျးနဲ့ ထိပျပိုငျးမှာနရောယူထားပါပွီ။ တရုတျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူအနနေနဲ့ 2020 ခုနှဈအတှငျး 5G ကှနျရကျနဲ့ စမတျဖုနျး 10 မြိုးလောကျ ထုတျပေးလာမယျလို့ အတညျပွုခကျြပေးထားပါတယျ။ အခု XiaomiMi 10 ကလညျး အဲ့ဒီဖုနျးတှထေဲကတမြိုးဖွဈမှာပါ။ XiaomiMi 10 က Snapdragon 865 SoC သုံးထားတဲ့ ပထမဆုံးစမတျဖုနျးတှထေဲမှာ ပါဝငျလာပါမယျ။ XiaomiMi 10 နှငျ့ Mi 10 Pro တို့မှာ Snapdragon 865 SoC အသုံးပွုလာမှာဖွဈလို့ 5G ထောကျပံ့လာမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ယငျး Chipset မှာ Snapdragon X55 Modem တပါတညျးပါဝငျထားပွီး ဖွဈပါတယျ။ အစောပိုငျးတုနျးက ပေါကျကွားထားတဲ့သတငျးအရ XiaomiMi 10 မှာမကျြနှာပွငျ 6.5 လကျမ OLED 90Hz Refresh Rate ပါဝငျလာမှာဖွဈပွီး RAM12GB ပါဝငျလာပါမယျ။ Storage 128GB/256GB/512GB တို့နှငျ့ ရှေးခယျြနိုငျပါမယျ။ ၎င်းငျးမှာကြောဘကျကငျမရာ4လုံးပါဝငျပွီး 108MP+48MP Telephoto+12MP Ultrawide+8MP Depth တို့သုံးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘကျထရီ 4500 mAh ပါဝငျကာ 48W Fast Charging ထောကျပံ့လာပါမယျ။ Xiaomi ဟာ Snapdragon 845 ကို Mi Mix 2S နဲ့ Snapdragon 855 ကို Mi9တှငျသုံးခဲ့သကဲ့သို့ Mi 10 တှငျလညျး Snapdragon 865 သုံးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
8) Oppo Find X2
Oppo Find X ရဲ့မြိုးဆကျသဈဖုနျးဟာ 2020 မှာထှကျရှိလာပါတော့မယျ။ MWC 2020 ဟာ အဲ့ဒီဖုနျးကိုထုတျပွဖို့ အကောငျးဆုံးနရောလို့ ဆိုရမှာပါ။ Digital Chat Station မှာဖျောပွထားမှုအရ OPPO Find X2 မှာ QHD+ 120Hz Refresh Rate အသုံးပွုလာမှာဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။ ဒီဖုနျးမှာ 3168×1440 px Resolution သုံးလာပါမယျ။ Samsung ရဲ့ထောငျ့ကှေး OLED သုံးလာမှာဖွဈပါတယျ။ မကျြနှာပွငျ 6.5 လကျမဖွဈလာမှာဖွဈပွီး မကျြနှာပွငျဘယျထောငျ့မှာ Punch-Hole ပါဝငျလာမှာဖွဈပါတယျ။ အသုံးပွုသူမြားအနဖွေငျ့ FHD+ (သို့မဟုတျ) QHD+ အပွငျ 60Hz (သို့) 120Hz Refresh Rate သုံးနိုငျပါမယျ။ OPPO က သူတို့ရဲ့အဆငျ့မွငျ့စမတျဖုနျးမှာ ရုပျထှကျပိုငျးအမိုကျစားသုံးလာမယျဆိုပမေယျ့ Galaxy S20 စီးရီးမှာတော့ FHD+ 120Hz ရုပျထှကျဘဲထောကျပံ့လာပါမယျ။ OPPO Find X2 က အဆငျ့မွငျ့စမတျဖုနျးဖွဈတာနဲ့အညီ Qualcomm Snapdragon 865 SoC နှငျ့ ပါဝါထောကျပံ့လာမှာဖွဈပွီး 5G ကှနျယကျအတှကျ Snapdragon X55 Modem သုံးလာပါမယျ။
9) Moto G8
Moto G7 စမတျဖုနျးကို MWC 2019 မတိုငျခငျမှာမိတျဆကျခဲ့ပမေယျ့ ။ Moto G8 ကိုဒီပှဲမှာမိတျဆကျမယျလို့ Moto G8 မှာ pop-up selfie ကငျမရာပါဝငျနိုငျပါတယျ။ Moto G8 နဲ့ Moto G8 Power ဆိုပွီး ဖုနျးသဈ2မြိုးမိတျဆကျလာနိုငျပါတယျ။ ဖုနျး2လုံးစလုံးမှာ Snapdragon 665 မောငျးနှငျထားမှာဖွဈပွီး G8 မှာ 6.39 လကျမ HD+ မကျြနှာပွငျထညျ့သှငျးထားမှာပါ။ Punch Hole Selfie ကငျမရာပါလာမှာဖွဈပွီး LCD အမြိုးအစားဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဲဒီအတှကျလကျဗှရောကိရိယာကို အနောကျဘကျမှာပဲ တပျဆငျထားနိုငျပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာကငျမရာ3လုံးပါလာပွီး 16MP ပငျမ၊ 2MP Macro နဲ့ 8MP Ultrawide တှဖွေဈပါတယျ။ အရှကေ့ငျမရာက 8MP ဖွဈပါတယျ။ G8 Power မှာပိုကွီးတဲ့ဘကျထရီပါလာပွီး 18W Quick Charge ပါတဲ့ 5,000mAh ဘကျထရီထညျ့ထားပါတယျ။ G8 မှာတော့ 10W Charging ပါတဲ့ 4,000mAh ဘကျထရီပါလာပါတယျ။ G8 Power မှာ 25MP Punch Hole ကငျမရာပါလာနိုငျပွီး 6.39 လကျမ LCD Full HD+ မကျြနှာပွငျထညျ့သှငျးထားမှာပါ။ အနောကျဘကျမှာကငျမရာ4လုံးပါလာမှာဖွဈပွီ3းလုံးက G8 နဲ့တူပါတယျ။ နောကျ 1 လုံးက 8MP Telephoto ကငျမရာ ဖွဈမှာပါ။
နည်းပညာလောကအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး၊ မျှော်လင့်ချင်စရာအကောင်းဆုံးနည်းပညာပြပွဲကြီးကို ဒီလရဲ့ နောက်ဆုံးပတ်မှာ ကျင်းပသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MWC 2020 ပွဲကြီးကို ဖေဖော်ဝါရီ 24 ရက်နေ့ကစလို့ 27 ရက်နေ့အထိ ဘာစီလိုနာမှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။ ဒီပွဲကြီးမှာတော့ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ 2020 ခုနှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချလာမယ့် အရည်အသွေးမြင့် ဖုန်းတွေကိုလာရောက်ပြသကြပါတယ်။ ဒီနည်းပညာပွဲမှာ ပြသလိုက်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေဟာ အနှေးနဲ့အမြန်ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာတာပါဘဲ။ အခု 2020 မှာလည်း စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ နည်းပညာမြင့်စမတ်ဖုန်းသစ်တွေ ထုတ်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်…. ။ အဲ့ဒီဖုန်းတွေက ဘာဖုန်းတွေများ ဖြစ်နေမလဲ …. ။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီရဲ့ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းကို MWC မှာ မိတ်ဆက်မှာလားဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ ရှင်းလင်းလွန်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Samsung ဟာ MWC မတိုင်ခင် လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် စမတ်ဖုန်းသစ်တွေကိုမိတ်ဆက် ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Galaxy S20 ဖုန်းသစ်တွေကိုမျော်လင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မကြာခင် ရက်ပိုင်းလောက်မှာ မြင်ရတော့မယ့်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဖုန်းသစ်တွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း အလုံးစုံနီးပါး လောက်ထွက်ထားပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။
အဆင့်မြင့် Galaxy ဖုန်းတွေကိုစောစီးစွာတွေ့ရပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ Galaxy A ဖုန်းသစ်တမျိုး ဒါမှမဟုတ် တမျိုးထက်ပိုတာမျိုးကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Samsung Galaxy A50 နဲ့ Samsung Galaxy A30 ဖုန်းတွေကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အခု 2020 မှာလည်းဒီလိုအလားသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Galaxy A ဖုန်းတွေဟာ လူကြိုက်များပြီး အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းတွေထဲမှာ ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဖြစ်နေလို့ပါ။ Galaxy A ဖုန်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ နည်းပညာအမြင့်ပိုင်းတွေ သုံးထားလည်းဆိုတာကို Galaxy A80 ကသက်သေပြထားပါတယ်။ Samsung ဘက်ကတော့ Galaxy A51 နဲ့ Galaxy A71 ဖုန်းတွေကို CES မှာထုတ်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့် MWC ပွဲမှာတော့ Galaxy Tab S6 5G သို့ wearable ထုတ်ကုန်တွေဘက်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ များပါတယ်။
Huawei ကတော့ ဒီပွဲကြီးအတွက် သတိထားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ့ ဒီတရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဟာ MWC မှာ အဓိကဖုန်းတွေကို ထုတ်ပြတတ်လို့ပါ။ ထင်ရှားတဲ့ အကြောင်းအရာတခုကို ပြောရမယ်ဆိုရင် foldable Huawei Mate X ကို MWC 2019 မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာမျိူးပါ။ Huawei P40အနေနဲ့ Google ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါကိုကပဲ Huawei အတွက် ဈေးကွက်အာရုံစိုက်ခံစရာ အကြောင်းရင်းတရပ် ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ Quad Quad Bayer filter နဲ့အတူ 52MP ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာအသစ်တွေ သုံးလာမယ်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ Huawei P40 စမတ်ဖုန်းရဲ့ ဈေးနှုန်းက ယူရို 600 ဝန်းကျင်နဲ့ ပရိုဖုန်းကတော့ ယူရို 800 ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယမြောက် မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ Huawei P40 Pro Premium edition ကိုတော့ ဒေါ်လာ 1000 နဲ့ ရောင်းချလာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ P40 Pro မှာ အရင်မျိုးဆက်ရဲ့ Notch အစားသေးငယ်တဲ့ Punch Hole ပါလာနိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်နဲ့ညာဘက်ဟာ ပိုကွေးညွှတ်မှာပါ။ အနောက်ဘက်မှာ 52MP Main ကင်မရာနဲ့အတူ Quad-bayer Filter ကြောင့် 13MP Photo တွေထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ အနောက်ကင်မရာ5လုံးတောင်ပါမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အရှေ့နဲ့အနောက်ဘက်ကို Curved Panel နဲ့ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက 6.5 လက်မကနေ 6.7 လက်မအတွင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်သူ Ming-Chi Kuoက P40 Pro ရဲ့ Periscope Telephoto ကင်မရာမှာ 10x Optical Zoom ပါမယ်လို့ မကြာခင်ကပြောထားပါတယ်။
Sony အနေနဲ့ MWC ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ မီဒီယာအသိပေးချက်တွေ မပေးထားပေမယ့် ဖုန်းမော်ဒယ်တမျိုးလောက်တော့ မိတ်ဆက်လာမယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်နေပါတယ်။ အများစုခန့်မှန်းချက်တွေအရ Sony Xperia2(သို့) Sony Xperia5Plus တမျိုးမျိုး ဖြစ်မယ်လို့ သတင်းထွက်ထားတာတော့ ရှိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Sony အနေနဲ့ MWC ပွဲတိုင်းမှာဖုန်းသစ်ပြသတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်တတ်လို့ပါ။ အထင်ရှားဆုံးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ 2019 က Sony Xperia 1 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာမျိုးပါ။ တကယ်လို့ Xperia2မိတ်ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် 21:9 display နဲ့ high-end specs တွေပါတဲ့ ဖုန်းမျိုးဖြစ်မှာကတော့ မလွဲပါဘဲ။ နောက်ထပ်ကတော့ ဒီဇိုင်းပိုင်းအပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပရိုဆက်ဆာကတော့ ဒီအချိန်ဒီပရိုဆက်ဆာမှ မသုံးဘာသွားသုံးမလည်းဆိုရလောက်အောင် Snapdragon 865 processor ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ကင်မရာအတွက် quad-lens camera, 12GB RAM နဲ့ 6.6-inch screen သာပါလာမယ်ဆိုရင် ဆိုနီဖန်တွေအတွက်တော့ အတော်မိုက်တဲ့ ဖုန်းဖြစ်လာမှာပါ။
Huawei ရဲ့ foldable phone ဖြစ်တဲ့ Mate X စမတ်ဖုန်းကို MWC 2019 မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို မှတ်မိကြအုံးမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ အဲ့ဒီ foldable phone ရဲ့နေရာကိုဆက်ခံမယ့် မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းကို မိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးခန့်မှန်းချက်တွေအရတော့ Huawei Mate Xs ကို မြင်ရတော့မယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမမျိုးဆက်နဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာအရမ်းကြီးကွာဟချက်တွေ ရှိလာမှာမဟုတ်ဘဲ အတွင်းပိုင်းတွေကိုတော့ အဆင့်မြင့်တင်မှုတွေ ပြလုပ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာအနီးစပ်ဆုံး ပြင်ဆင်ချက်ရှိမယ်ဆိုရင် ပရိုဆက်ဆာနဲ့ ကင်မရာတို့ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ original Mate X ကတော့ ကင်မရာပိုင်းမှာ Mate 20 နဲ့တူပြီး၊ ပရိုဆက်ဆာကတော့ P30 သုံးထားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Mate Xs ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ P30 Pro ကင်မရာနဲ့ Mate 30 ပရိုဆက်ဆာ ဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အသစ်မိတ်ဆက်လာမယ့် Mate Xs ဟာ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာပိုကောင်းတဲ့ ဖန်သားပြင်ချိတ်ဆက်မှုနဲ့အတူ ဖန်သားပြင်ဟာ ပိုမိုသန်မာလာပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းကို အတော်ဂရုစိုက်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့လည်း သိရရပါတယ်။ Mate X ထက်ပိုသေးမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ သူ့ဟာအရင်ဗားရှင်းထက် ဈေးပိုသက်သာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာဖန်သားပြင် ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာ ပိုမိုတိုးတက်လာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Nokia အနေနဲ့ Nokia9PureView ကို MWC 2019 မှာထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် MWC 2020 မှာမျှော်လင့်ရမှာက Nokia 9.2 PureView ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ထွက်လာမယ့် ဖုန်းဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတချို့ ရှိပေမယ့် Nokia 9.2 PureView ဆိုတာကတော့ အတော်လေးခေါ်လို့ကောင်းတဲ့ နာမည်လို့သာပြောရမှာပါ။ အားလုံးကတော့ Nokia 9.1 ထက် Nokia 9.2 PureView သာပို ဖြစ်သင့်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးထားကြပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းမှာကင်မရာပိုင်းနဲ့ 5G အဆင့်မြင့်တင်မှုပါမှာကတော့ သေချာပါတယ်။ ဒီဖုန်းသစ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ကောလာဟလတွေ ထွက်ထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးရသတင်းပေါ် မူတည်တွက်ချက်ရရင် နောက်ဆုံးပေါ် Snapdragon 865 chipset ကိုသုံးမယ်ဆိုတာပါ။ HMD Global အနေနဲ့ MWC ပြီးမှလည်း ဖုန်းသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
LG အနေနဲ့ MWC မှာဖုန်းသစ်တလုံးလောက်တော့ မိတ်ဆက်မယ်ဆိုပြီး ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ အားလုံးကတော့ LG G9 ဖုန်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မျှော်နေကြပါတယ်။ LG G9 ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တုိ့ဘာသတင်းအချက်မှ မရသေးပါဘူး။ ကြည့်ရ တာတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ ဒီဖုန်းမှာထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ LG flagships တွေမှာ ထည့်ပေးထားတဲ့ function မျိုးတွေသုံးရမှာပါ။ LG G8X ThinQ လိုမျိုး ဒုတိယမျက်နှာပြင် ချိတ်ဆက်မှုရတဲ့ ဖုန်းဖြစ်လာမလား၊ LG G8 လိုမျိုးhole-less vibrating speaker ဖုန်းမျိုးဖြစ်မလား။ အဲ့ဒီထက်များ ဆန်းသစ်လာမလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Xiaomi အနေနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံရဲ့ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကိုရဖို့အတွက် တောက်လျောက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူ့ဆီကထွက်တဲ့ ဖုန်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာနေရာယူထားပါပြီ။ တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအနေနနဲ့ 2020 ခုနှစ်အတွင်း 5G ကွန်ရက်နဲ့ စမတ်ဖုန်း 10 မျိုးလောက် ထုတ်ပေးလာမယ်လို့ အတည်ပြုချက်ပေးထားပါတယ်။ အခု XiaomiMi 10 ကလည်း အဲ့ဒီဖုန်းတွေထဲကတမျိုးဖြစ်မှာပါ။ XiaomiMi 10 က Snapdragon 865 SoC သုံးထားတဲ့ ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ ပါဝင်လာပါမယ်။ XiaomiMi 10 နှင့် Mi 10 Pro တို့မှာ Snapdragon 865 SoC အသုံးပြုလာမှာဖြစ်လို့ 5G ထောက်ပံ့လာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ယင်း Chipset မှာ Snapdragon X55 Modem တပါတည်းပါဝင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းတုန်းက ပေါက်ကြားထားတဲ့သတင်းအရ XiaomiMi 10 မှာမျက်နှာပြင် 6.5 လက်မ OLED 90Hz Refresh Rate ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး RAM12GB ပါဝင်လာပါမယ်။ Storage 128GB/256GB/512GB တို့နှင့် ရွေးချယ်နိုင်ပါမယ်။ ၎င်းမှာကျောဘက်ကင်မရာ4လုံးပါဝင်ပြီး 108MP+48MP Telephoto+12MP Ultrawide+8MP Depth တို့သုံးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ 4500 mAh ပါဝင်ကာ 48W Fast Charging ထောက်ပံ့လာပါမယ်။ Xiaomi ဟာ Snapdragon 845 ကို Mi Mix 2S နဲ့ Snapdragon 855 ကို Mi9တွင်သုံးခဲ့သကဲ့သို့ Mi 10 တွင်လည်း Snapdragon 865 သုံးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Oppo Find X ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းဟာ 2020 မှာထွက်ရှိလာပါတော့မယ်။ MWC 2020 ဟာ အဲ့ဒီဖုန်းကိုထုတ်ပြဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာလို့ ဆိုရမှာပါ။ Digital Chat Station မှာဖော်ပြထားမှုအရ OPPO Find X2 မှာ QHD+ 120Hz Refresh Rate အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ 3168×1440 px Resolution သုံးလာပါမယ်။ Samsung ရဲ့ထောင့်ကွေး OLED သုံးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် 6.5 လက်မဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ဘယ်ထောင့်မှာ Punch-Hole ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် FHD+ (သို့မဟုတ်) QHD+ အပြင် 60Hz (သို့) 120Hz Refresh Rate သုံးနိုင်ပါမယ်။ OPPO က သူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းမှာ ရုပ်ထွက်ပိုင်းအမိုက်စားသုံးလာမယ်ဆိုပေမယ့် Galaxy S20 စီးရီးမှာတော့ FHD+ 120Hz ရုပ်ထွက်ဘဲထောက်ပံ့လာပါမယ်။ OPPO Find X2 က အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်တာနဲ့အညီ Qualcomm Snapdragon 865 SoC နှင့် ပါဝါထောက်ပံ့လာမှာဖြစ်ပြီး 5G ကွန်ယက်အတွက် Snapdragon X55 Modem သုံးလာပါမယ်။
Moto G7 စမတ်ဖုန်းကို MWC 2019 မတိုင်ခင်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပေမယ့် ။ Moto G8 ကိုဒီပွဲမှာမိတ်ဆက်မယ်လို့ Moto G8 မှာ pop-up selfie ကင်မရာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ Moto G8 နဲ့ Moto G8 Power ဆိုပြီး ဖုန်းသစ်2မျိုးမိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်း2လုံးစလုံးမှာ Snapdragon 665 မောင်းနှင်ထားမှာဖြစ်ပြီး G8 မှာ 6.39 လက်မ HD+ မျက်နှာပြင်ထည့်သွင်းထားမှာပါ။ Punch Hole Selfie ကင်မရာပါလာမှာဖြစ်ပြီး LCD အမျိုးအစားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လက်ဗွေရာကိရိယာကို အနောက်ဘက်မှာပဲ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာကင်မရာ3လုံးပါလာပြီး 16MP ပင်မ၊ 2MP Macro နဲ့ 8MP Ultrawide တွေဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ကင်မရာက 8MP ဖြစ်ပါတယ်။ G8 Power မှာပိုကြီးတဲ့ဘက်ထရီပါလာပြီး 18W Quick Charge ပါတဲ့ 5,000mAh ဘက်ထရီထည့်ထားပါတယ်။ G8 မှာတော့ 10W Charging ပါတဲ့ 4,000mAh ဘက်ထရီပါလာပါတယ်။ G8 Power မှာ 25MP Punch Hole ကင်မရာပါလာနိုင်ပြီး 6.39 လက်မ LCD Full HD+ မျက်နှာပြင်ထည့်သွင်းထားမှာပါ။ အနောက်ဘက်မှာကင်မရာ4လုံးပါလာမှာဖြစ်ပြီ3းလုံးက G8 နဲ့တူပါတယ်။ နောက် 1 လုံးက 8MP Telephoto ကင်မရာ ဖြစ်မှာပါ။
Previous articleOPPO Reno2 F
Pixel4Made By Google : Biggest Event Of The Year